सफ्टवेयर सिर्जना र पठाउने थोक इमेल सन्देश.
व्यावसायिक सफ्टवेयर ई-मेल समाचारपत्र
यो कार्यक्रम स्थापना आवश्यकता छैन, पछि चलान unzipping the folder.
बहुभाषी वातावरण छ । किनारा बिना.
भिडियो Framework 4.5
विशेषताहरुभन्दा XMailer III देखि अलग अन्य
एक ठूलो चयन को लागि उपकरण अद्वितीय images र पाठ.
को पाठ्यक्रम मा वितरण र दृश्य को निगरानी प्रक्रिया हो ।
तथ्याङ्क को यस्तो लेखिएको छ
पत्ता कसरी धेरै मानिसहरू खुला र पढ्न आफ्नो newsletter.
प्रयोगकर्ता-अनुकूल सम्पादक बनाउन मदत गर्नेछ एक इमेल टेम्प्लेट लागि पत्राचार.
सुरु स्थापना बिना
कार्यक्रम चल्छ पनि संग छडी गर्न सन्दर्भ बिना "हार्डवेयर".
धनी अनुभव छ
हाम्रो टीम सम्झौता संग इमेल समाचारपत्रहरूमा 2008 देखि र त्यो समय मा हामी संचित छन् विशाल अनुभव छ । मा XMailer हामी निरन्तर महसुस हाम्रो उपलब्धिहरू र तपाईं निःशुल्क लागि उनलाई प्राप्त हरेक अपडेट.
मुक्त र असीमित
XMailer लागि एक मुक्त आवेदन छ इमेल वितरण । मुक्त संस्करण मा कुनै सीमितता अवधि र संख्या पठाए इमेल.
उपकरण को लागि पेशेवरों
जो प्रयोगकर्ताका लागि इच्छा को सबै प्राप्त गर्न हाम्रो अनुभव र सेवा गर्न सजिलै प्रभावकारी बनाउन मेल मा एक आवेदन, हामी विकास को पूर्ण संस्करण हो. यो गर्न आउँछ प्रत्येक खरीद पछि एक भुक्तानी लाइसेन्स ।
छिटो तथ्याङ्क प्रयोगकर्ता XMailer
हामी निरन्तर बढ्दै र क्षण मा:
स्क्रीनशटहरु स्क्रीनशटहरु XMailer III
मुक्त लागि यो प्रयास
डाउनलोड हाम्रो अनुप्रयोग निःशुल्क.
समीक्षा XMailer IIIबाहिर पाउन के मान्छे भन्न about us
एक वेबसाइट लागि 13 rubles प्रति 1000 वर्ण, गुणवत्ता, ग्यारेन्टी, अतुलनीय http://cllic.xyz/xr7